Fanafihana fampihorohoroana mahatsiravina amin'ny Katedraly Katolika mandritra ny fametraham-bahoaka ny drafitry ny fizahantany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanafihana fampihorohoroana mahatsiravina amin'ny Katedraly Katolika mandritra ny fametraham-bahoaka ny drafitry ny fizahantany
Ny Nosy Jolo any Filipina dia midika hoe fifangaroan'ny Silamo sy ny Kristiana manandrana miara-monina. Ny planina dia manana drafitra lehibe ny ho tonga toeram-pizahantany karazana Boracay any Filipina 6 taona lasa izay, saingy tsy nivelatra firy tamin'ny indostrian'ny mpitsidika. Hahita moske maro loko ao an-tanàna ny mpizahatany. Tausug na ny olona eo an-toerana dia tena sariaka sy tia mandray vahiny.
Androany na izany aza, ny mpampihorohoro dia nanapoaka ny katedraly tao an-tanàna nandritra ny famonoana katolika namono 27, nandratra 77 farafahakeliny. Nisy baomba roa. Ny baomba voalohany dia niditra tao amin'ny katedraly Jolo na renivohitry ny faritany, narahin'ny fipoahana fanindroany teo ivelan'ny trano fitehirizan-kery rehefa namaly ny fanafihana ny herim-panjakana, hoy ny tompon'andraikitra misahana ny fiarovana. Ny fipoahana dia nanapoaka ny fidirana mankao amin'ny katedraly ary nandriatra ny efitrano malalaky ny vavahady, ary nanaparitaka ny dabilio ary nampidina ny varavarana hafa.
Nosy Jolo no nosy lehibe indrindra ao amin'ny nosin'i Sulu, Filipina Andrefana. Manana morontsiraka fasika fotsy mahafinaritra, mety ho lasa resa-nosy toa an'i Boracay any afovoan'i Filipina na koa Phuket any Thailandy ao anatin'ny drafi-pizahantany vaovao hisarika ny mpitsidika Filipino sy vahiny.
Androany anefa dia nisy sary mampiseho potipoti-javatra sy vatana mangatsiaka eny amin'ny arabe be olona ivelan'ny Katedraly Our Lady of Mount Carmel, izay tratry ny baomba taloha. Ny miaramila izay nitondra fiaramanidina mifono vy no nanidy ny làlambe mankeny amin'ny fiangonana raha nitondra ny maty ny naratra ary naratra nankany amin'ny hopitaly. Ny sasany tamin'ireo namoy ny ainy dia nafindra tamin'ny rivotra namonjy ny tanàna Zamboanga akaiky.
Ankoatra ny morontsiraka fasika fotsy, ny Nosy Jolo koa dia manankarena harena voajanahary sy tontolo iainana anaty rano. Malaza noho ny foza anaty rano antsoina hoe “curacha”Sy voankazo hafakely, toy ny voankazo durian sy mangosteen. Izy io dia manana famokarana lehibe amin'ny tadin'ny abaca na "arabica", tsaramaso robusta, kopra, ary carrageenan.